Kulan Lagu Qiimaynayay Bah-wadaagta Mashruuca RIF. - Cakaara News
Kulan Lagu Qiimaynayay Bah-wadaagta Mashruuca RIF.
Jigjiga(cakaaranews),talaado, 27da, December, 2016. Xafiiska caafimaadka DDSI ayaa kulan qiimayn ah u qabtay hay’adaha dawliga ah iyo kuwa aan dawliga ahayn ee bah-wadaagta la ah mashruuca dhimista dhimashada hooyada iyo dhalaanka ee afka qalaad marka la soo gaabiyo loo yaqaano RIF.
Kulankan oo ka dhacay xafiiska caafimaadka DDSI ayaa waxaa hogaaminayya ku simaha xafiiska Caafimaadka DDSI ahna gadhwadeenka geedi socodka kor u qaadida caafimaadka, ka hortaga cudurada iyo fidinta caafimaadka ee xafiiska caafimaadka DDSI mudane Caydaruus Axmed, ayaa waxaa ka soo qaybgalay masuuliyiinta mashruuca RIF iyo dhamaan bah-wadaagta mashruuca RIF ee qaybtiisii 1aad iyo qaybtiisii 2aad.
Kulankan ayaa lagu qiimaynayay waxqabadkii mashruuca, halkaas oo ay hay’ad waliba wixii u qorshaysnaa iyo wixii u qabsoomay ku soo bandhigtay si qota dheerna looga dooday la islana meel dhigay dhankii adkaa iyo dhankii jilicda sanaa ee waxqabadka mashruuca RIF.
Gaba-gabadii kulankan ayaa waxaa la isla qaatay sidii looga midha dhalinlahaa qorshayaasha u yaala mashruuca si gaar ahaaneed iyo qorsha yaasha xafiiska caafimaadka DDSI ee ku salaysan adeega caafimaadka ee dhimista dhimashada hooyada iyo dhalaanka,